Home Wararka Musharax Madaxweynaha Soomaaliya Xaaji Maxamed Yasin oo lagu xiray Nairobi
Musharax Madaxweynaha Soomaaliya Xaaji Maxamed Yasin oo lagu xiray Nairobi
Musharax Madaxweynaha Soomaaliya Xaaji Maxamed Yasin ayaa lagu giray Magaalada Nairobi sida ay qorreen wargeysyada dalka Kenya. Siyaasigan ayaa lagu eedeeyay inuu lacag gaaraysa 4 Million oo lacagta Kenya ah, hab aan sax ahayn uga qaatay Nin sida la sheegay uu ku qanciyey inuu iibsado Guri la deggan yahay, inkasta oo aan weli kiiska loo haystaa dibedda u soo wada bixin.
Jariiradda standard oo ka mid ah Warbaahinta Kenya, ayaa baahisay in Siyaasigan oo sidoo kale ah Hantiile iyo Maalgashade uu ku xidhan yahay Saldhig Boolis oo ku yaalla deegaanka Pangani oo ka mid ah Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya. Xadhiggiisa waxa amartay Maxkamad ku taalla Magaalada Nairobi, sida uu sheegay Wargeska standard oo Geeska Afrika uu warkan ka soo xigtay.
Joseph Mburugu oo ah Dacwad-oogaha gacanta ku haya kiiska siyaasigan, ayaa diiday in la siidaayo, isagoo walaac ka muujiyey in haddii la siidaayo uu baxsado. Maxkamadda oo xiganaysa baadhaha kiiskan, ayaa sheegtay in Maxamed Cumar Xasan oo ah Ninka soo eedeeyay Siyaasiga Maxamed Yaasiin Ismaaciil uu sheegay in eedaysanuhu u sheegay inuu awood u leeyahay inuu iibiyo Guri la deggan yahay, ka dibna uu lacagta ka qaatay bishii February, 2021.
Previous articleKhilaafka u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya oo cirka isku shareeray
Next articleKenya and Somalia seek to improve ties, fight Al-Shabaab